McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Nichol Higdon sida kuxigeenka madaxa maaliyada iyo howlgalada
Baadhitaan qaran kadib, hay’ada McKnight Foundation waxay u magacowday Nichol Higdon gudoomiye kuxigeenka cusub ee maaliyada iyo howlaha. Higdon wuxuu ku yimaadaa McKnight ka dib 12 sano oo uu ku jiray doorarka hogaaminta sare ee adeega YMCAs, kuna takhasusay agabyada aadanaha, howlaha, lacag aruurinta, iyo guddiga iyo kaqeybgalka bulshada. Waxay ku biirtay Aasaaska marxalad isbadal iyadoo McKnight ay isu diyaarineyso raadinta madaxweynaha, wuxuu fidiyaa barnaamijkeeda 'Westwest Climate & Energy', oo dhista a barnaamijka cusub ee bulshada loogu talagalay caddaalad badan oo loo dhan yahay oo loo dhan yahay Minnesota.
Laga bilaabo Janaayo 6, 2020, Higdon waxay kormeeri doontaa maaliyadda McKnight, kheyraadka aadanaha, macluumaadka iyo tignoolajiyada, u hoggaansanaanta, iyo tas-hiilaadka iyo waaxyaha adeegyada martida. Waxay si dhow ula shaqayn doontaa guddiga McKnight, madaxweynaha ku meel gaadhka ah Debby Landesman, iyo hoggaamiyeyaasha kale ee sarsare si ay si mas'uuliyadi ku jirto oo wax ku ool ah u maamulaan dhaqaalaha McKnight oo ay si hawl-gal ah u dhaqaajiyaan himiladooda.
“Waxaan ku faraxsanahay in Nichol uu nagu soo biiri doono madaxweyne kuxigeenka cusub ee maaliyada iyo howlaha,” ayuu yiri Debby Landesman. Waxay khibraddeeda layaabka leh ka keentaa shaqadeeda kobcinta iyo hoggaaminta ururada samafalka waaweyn, maaraynta kakanaanta hawlgallada iyo is-beddelka, iyo karti-xirfadeedka si ay horumarto. Waxaan qiimeyneynaa dadaalkeeda muujineysa iyo khibradda ay kaqeybgalidoonto qaybaha kaladuwan, iskudhafka, iyo sinnaanta. ”
Intii ay ku jirtay hawsheeda oo dhan, Nichol Higdon waxay muujisay xirfad weyn iyo guul ay ku abuurtay nidaamyo horseed u ah wax ku oolnimada abaabulka iyo saamaynta.
Xirfad ayaa diirada saaray xoojinta ururada iyo dadka
Intii ay ku jirtay hawsheeda oo dhan, Nichol Higdon waxay muujisay xirfad weyn iyo guul ku abuura nidaamyo horseed u ah wax ku oolnimada abaabulka iyo saamaynta. In kabadan toban sano, waxay u adeegtay YMCA tiro ka mid ah doorarka hogaaminta fulinta, iyada oo diiradda la saaray aruurinta, dhismaha xiriirka, ka qeyb galka bulshada, horumarinta ganacsiga cusub, horumarinta ururada, iyo hufnaanta howlgalka iyo waxqabadka.
Kaalinta ugu dambeysa ee Higdon wuxuu ahaa kuxigeenka madaxa howlaha iyo agaasimaha fulinta ee YMCA ee Magaalooyinka Weyn ee Weyn. Intaas ka hor, waxay u shaqeysay kuxigeenka madaxa howlgalada iyo sarkaalka howlgalka ee YMCA ee Greater Hartford, iyo kuxigeenka madaxa fulinta howlaha iyo madaxa sarkaalka kheyraadka aadanaha ee YMCA ee Greater Cleveland.
Higdon wuxuu heystaa shahaadada JD oo ka socota Kuliyadda Sharciga ee Cleveland-Marshall, Jaamacada Cleveland, iyo BA ee maamulka ganacsiga oo xoogga saareysa ilaha aadanaha ee Jaamacadda David N. Myers University. Waxay ka shaqeysay Navy Navy ee Mareykanka ah sarkaalka seddexaad ee loo yaqaan 'E-4 Petty Officer'.
Iyadu waa hoggaamiye firfircoon nolosha bulshada. Waxay si mutadawacnimo ah ugu shaqaysay Cleveland-Marshall Kuliyada Sharciga Alumni ee Ururka dadka laga tirada badan yahay; Machadka Benjamin Rose ee guddiga agaasimayaasha gabowga; iyo Walaalaha Big Big ee Mareykanka. Waxay sidoo kale siisay iskaashi iskaa wax u qabso ah oo ku saabsan HR iyo howlo loogu talagalay faa'iidooyin kala duwan.
Higdon, oo asal ahaan ka soo jeeda Cleveland, Ohio, waxay ku nooshahay Apple Valley iyada iyo gabadheeda toddobada sano jirka ah, Zion.
"Waa waqti qaali ah in aan ku biiro Ururka McKnight, waxaana sharaf ii ah in aan doorkan qaato," ayuu yiri Higdon. Anigoo ku dhisaya dhaxalka iyo nidaamyada iyo awoodaha hareeyay ururkan muddo tobanaan sano ah, waxaan rajeynayaa inaan iskaashi la sameeyo asxaabteyda si aan ugu gudbo wejiga xiga ee saameynta. ”
Ku saabsan maktabadda McKnight